BISA CAMPUS CLOSED FROM TUESDAY 15 SEPTEMBER – Bahan International Science Academy
September 14, 2020 BISA Editor
Sadly, the number of cases of COVID-19 in Yangon is rising, and the Union Government’s committee has instructed that we should all stay at home so far as possible. We have therefore decided to close the BISA campus from Tuesday 15 September until further notice. Online lessons will continue normally.
We want to make sure that we stay in close touch with our families during this time. The best places to look for up to date information are our website, www.bisa-edu.mm, and Facebook page: www.facebook.com/bahaninternationalscienceacademy/
If you need to contactamember of staff about your child’s welfare or progress, please contact our Student Affairs hotline on 09456481950 between9am and4pm Monday to Friday.
If your query is about finance or anything else, please contact Administration on: 09456481960 between9am and4pm, Monday to Friday.
Parents in Years 2-5 have the phone numbers of the assistant teachers and may continue to use those numbers now. If you would like to speak toateacher, please do so via Google Classroom or (in primary) Class Dojo. You can also arrangeaphone call or video meeting withateacher through the Student Affairs Hotline.
If you need further assistance, please contact the relevant Leadership Team member:
High School: hs.vp.bisa@bfi-edu.com
In the last week, the Leadership Team has observed almost all teachers in their online classrooms. I am very pleased by the quality of teaching and the response of the students. While we all look forward toarapid return to normality, it is very encouraging to see how well everybody at BISA is adapting to this challenge.
စကျတငျဘာလ ၁၅ ရကျ အင်ျဂါနမှေ့ စတငျ၍ BISA ကြောငျးဝငျးကို ခတ်ေတပိတျထားကွောငျးကွညောခကျြ
ဝမျးနညျးစှာဖွငျ့ ရနျကုနျမွို့တှငျး ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါကူးစကျသူလူဦးရေ တိုးပှားလာမှုကွောငျ့ ပွညျထောငျစု အစိုးရမှ လုပျသားပွညျသူအားလုံးကို တတျနိုငျသရှေ့ မိမိအိမျတှငျ နကွေရနျ တိုကျတှနျးထားပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကြှနိုပျတို့ BISA ကြောငျးဝငျးကိုလညျး စကျတငျဘာလ ၁၅ ရကျ အင်ျဂါနမှေ့ စတငျ၍ ထပျမံအကွောငျးကွားသညျ့အခြိနျအထိ ခတ်ေတပိတျထားမညျဖွဈပါသညျ။ Online သငျကွားမှုမြားမှာမူ ပုံမှနျအတိုငျး ဆကျလကျသငျကွားသှားမညျဖွဈပါသညျ။
ကြောငျး၏သတငျးမြား၊ မိသားစု အဖှဲ့မြားနှငျ့ အဆကျအသှယျမပွတျသှားစရေနျ ကြောငျး၏ website ဖွဈသော www.bisa-edu.mm တှငျလညျးကောငျး၊ ကြောငျး၏ facebook page ဖွဈသော www.facebook.com/bahaninternationalscienceacademy/ တှငျလညျးကောငျး ကြောငျးနှငျ့ ပတျသကျသော အခကျြအလကျမြားကို ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။
မိဘမြား၏ သား/သမီးမြားနှငျ့ ပတျသကျပွီး တဈစုံတဈရာ သိရှိလိုသညျဖွဈစေ၊ ကြောငျးသားအခွအေနနှေငျ့ ပတျသကျပွီး စုံစမျးမေးမွနျးလိုသညျဖွဈစေ ကြောငျးသားရေးရာဌာန
ဖုနျး-၀၉၄၅၆၄၈၁၉၅၀ သို့တနင်ျလာနမှေ့ သောကွာနအေ့တှငျး မနကျ ၉ နာရီမှ နလေ့ညျ ၄ နာရီ အထိ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
ကြောငျး၏ စီမံခနျ့ခှဲရေးမှုရေးရာပိုငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍သျောလညျးကောငျး၊ finance အပိုငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍သျောလညျးကောငျး သိရှိမေးမွနျးလိုပါက Administration ဌာန
ဖုနျး – ၀၉၄၅၆၄၈၁၉၆၀ သို့တနင်ျလာနမှေ့ သောကွာနအေ့တှငျး မနကျ ၉ နာရီမှ နလေ့ညျ ၄ နာရီ အထိ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
Year2မှ Year5အထိ ကြောငျးသားမိဘမြားသညျ လကျထောကျဆရာမမြားထံသို့ ဆကျသှယျနိုငျပွီး ဘာသာရပျ ဆရာမြား၊ အတနျးပိုငျဆရာမြားနှငျ့ ဆကျသှယျလိုပါက Google Classroom သို့ Class Dojo မှ ဖွဈစေ၊ ကြောငျးသားရေးရာဌာနသို့ ဖုနျးဆကျအကွောငျးကွားပွီး ဖုနျးဆကျနိုငျရနျအခြိနျ ခြိနျးဆိုခွငျး/ Video call ဖွငျ့ တှဆေုံ့နိုငျရနျ ခြိနျးဆိုခွငျးမြား စီစဉျပေးရနျ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
ပိုမိုသိရှိမေးမွနျးလိုသညျတဈစုံတဈရှိခဲ့ပါက သကျဆိုငျရာ အုပျခြူပျမှုအသငျးအဖှဲ့ဝငျမြားထံသျို့ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
မူလတနျး – vpprimarybisa@bfi-edu.com
အလယျတနျး – vpsecondarybisa@bfi-edu.com
အထကျတနျး – hs.vp.bisa@bfi-edu.com
အထှထှေေ – principal@bisa-edu.com
ပွီးခဲ့သော ရကျသတ်တပတျအတှငျး online ဖွငျ့ သငျကွားမှုမြားကို သကျဆိုငျရာ အုပျခြူပျရေးရာပိုငျးမြားမှ လလေ့ာစဈဆေးမှုမြားပွုလုပျခဲ့ပွီး ကနြေပျဖှယျကောငျးသော အရညျအသှေးမှီ သငျကွားမှုမြားနှငျ့ ကြောငျးသားမြားထံမှ ကောငျးမှနျသော တုံ့ပွနျခကျြမြားကို တှခေဲ့ရပါသညျ။ ကြောငျးမြား ပုံမှနျအတိုငျးပွနျလညျဖှငျ့လှဈနိုငျရေးကို မြှျောမှနျးစောငျ့စားလကျြရှိနသေညျ့အခြိနျအတှငျးတှငျ BISA အဖှဲ့ဝငျအားလုံး ယခုကဲ့သို့စိနျချေါမှုမြိုးကို ကွိုးစားရငျဆိုငျနကွေသညျကို တှရေ့သညျမှာ အားတကျဖှယျရာ တဈခုဖွဈကွောငျးပွောခငျြပါသညျ။
မိဘမြား၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုအား ကြေးဇူးတငျကွောငျး ထပျမံပွောကွားခငျြပါသညျ။
စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက် အင်္ဂါနေ့ မှ စတင်၍ BISA ကျောင်းဝင်းကို ခေတ္တပိတ်ထားကြောင်းကြေညာချက်
၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ တွင်း ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကူးစက်သူလူဦးရေ တိုးပွားလာမှုကြောင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှ လုပ်သားပြည်သူအားလုံးကို တတ်နိုင်သရွေ့မိမိအိမ်တွင် နေကြရန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ကျွနိုပ်တို့BISA ကျောင်းဝင်းကိုလည်း စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက် အင်္ဂါနေ့ မှ စတင်၍ ထပ်မံအကြောင်းကြားသည့်အချိန်အထိ ခေတ္တပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Online သင်ကြားမှုများမှာမူ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်း၏သတင်းများ၊ မိသားစု အဖွဲ့ များနှင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်သွားစေရန် ကျောင်း၏ website ဖြစ်သော www.bisa-edu.mm တွင်လည်းကောင်း၊ ကျောင်း၏ facebook page ဖြစ်သော www.facebook.com/bahaninternationalscienceacademy/ တွင်လည်းကောင်း ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မိဘများ၏ သား/သမီးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ သိရှိလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းသားအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းလိုသည်ဖြစ်စေ ကျောင်းသားရေးရာဌာန
ဖုန်း-၀၉၄၅၆၄၈၁၉၅၀ သို့ တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ အတွင်း မနက် ၉ နာရီမှ နေ့ လည် ၄ နာရီ အထိ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျောင်း၏ စီမံခန့် ခွဲရေးမှုရေးရာပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ finance အပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း သိရှိမေးမြန်းလိုပါက Administration ဌာန
ဖုန်း – ၀၉၄၅၆၄၈၁၉၆၀ သို့ တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ အတွင်း မနက် ၉ နာရီမှ နေ့ လည် ၄ နာရီ အထိ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Year2မှ Year5အထိ ကျောင်းသားမိဘများသည် လက်ထောက်ဆရာမများထံသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ဘာသာရပ် ဆရာများ၊ အတန်းပိုင်ဆရာများနှင့် ဆက်သွယ်လိုပါက Google Classroom သို့Class Dojo မှ ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းသားရေးရာဌာနသို့ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပြီး ဖုန်းဆက်နိုင်ရန်အချိန် ချိန်းဆိုခြင်း/ Video call ဖြင့် တွေ့ ဆုံနိုင်ရန် ချိန်းဆိုခြင်းများ စီစဉ်ပေးရန် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိမေးမြန်းလိုသည်တစ်စုံတစ်ရှိခဲ့ပါက သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချူပ်မှုအသင်းအဖွဲ့ ဝင်များထံသ်ို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
မူလတန်း – vpprimarybisa@bfi-edu.com
အလယ်တန်း – vpsecondarybisa@bfi-edu.com
အထက်တန်း – hs.vp.bisa@bfi-edu.com
အထွေထွေ – principal@bisa-edu.com
ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အတွင်း online ဖြင့် သင်ကြားမှုများကို သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချူပ်ရေးရာပိုင်းများမှ လေ့လာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသော အရည်အသွေးမှီ သင်ကြားမှုများနှင့် ကျောင်းသားများထံမှ ကောင်းမွန်သော တုံ့ ပြန်ချက်များကို တွေ့ ခဲ့ရပါသည်။ ကျောင်းများ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကို မျှော်မှန်းစောင့်စားလျက်ရှိနေသည့်အချိန်အတွင်းတွင် BISA အဖွဲ့ ဝင်အားလုံး ယခုကဲ့သို့ စိန်ခေါ်မှုမျိုးကို ကြိုးစားရင်ဆိုင်နေကြသည်ကို တွေ့ ရသည်မှာ အားတက်ဖွယ်ရာ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောချင်ပါသည်။
မိဘများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်မံပြောကြားချင်ပါသည်။